warkii.com » Robin Van Persie Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ballon d’Or Ku Tartami Doona – Kuma Jiraan Ronaldo Iyo Messi
Robin Van Persie Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ballon d’Or Ku Tartami Doona – Kuma Jiraan Ronaldo Iyo Messi
12kii sannadood ee ugu dambeeyey ayay 11 ka mid ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ku guuleysteen abaal-marinta xiddiga ugu fiican dunida ee Ballon d’Or, laakiin doorkan labadooda midkoodna shaqo kuma laha, sida uu rumaysan yahay weeraryahankii hore ee kooxaha Arsenal, Manchester United iyo xulka qaranka Netherlands ee Robin van Persie.
Laga soo bilaabo sannadkii 2008, Cristiano Ronaldo iyo Messi ayaa ahaa xiddigaha adduunka, laakiin sannadkii 2018 ayuu Luka Modric kasoo dhex-galay kaddib bandhig layaab lahaa oo uu ka sameeyey Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka iyo kooxdiisa Real Madrid oo uu ka caawiyey inay ku guuleysato Champions League.
Laakiin waxa kala wareegay Lionel Messi oo dib u helay xiddignimadiisa oo markii lixaad la guddoonsiiyey halka Cristiano uu rajaynayo inuu sannadkan fursad heli doono oo aanu wali quusan. Sidaas oo kale waxa tartanka ku jira Lionel Messi.
Van Persie oo ka hadlayay telefishanka BT Sports ayaa labadan ciyaartoy u sheegay in aanay ku xisaabtamin inay sannadkan sugaan hanashada Ballon d’Or, waxaanu magacaabay saddexda ciyaartoy ee midkood ku guuleysan doono.
Weeraryahanka Bayern Munich ee Robert Lewandowski, kubbad-sameeyaha Manchester City ee Kevin de Bruyne iyo xiddiga Liverpool ee Sadio Mane ayuu Van Persie sheegay inay yihiin xiddigaha ku tartamaya abaal-marinta.
Lewandowski ayaa kooxdiisa u qaaday Bundesliga, iyo German Cup, waxaanay sugayaan kaliya inay Champions League u dagaallamaan, iyagoo lugtii hore ee wareegga 16kana kusii garaacay Chelsea oo sugaya in is-aragga labaad ay Bavaria ku qaabilaan.
Waxa kale oo uu Lewandowski hoggaaminayaa abaal-marinta kabta dahabka ah ee Yurub isaga oo dhaliyey 34 gool oo horyaalka ah, waxaana ku xiga Ciro Immobile oo dhawrka ciyaarood ee uga hadhay horyaalka Serie A kusoo qaban kara haddii nasiibku caawiyo.
Kevin de Buryne ayaa isaguna udub-dhexaad u ahaa bandhigga cajiibka ah ee ay kooxdiisu samaynaysay xili ciyaareedkan, waxaana inkasta oo horyaalka Premier League ay kaga guuleysatay Liverpool uu haddana City ka caawiyey inay hanato Carabao Cup, halka ay FA Cup taagan yihiin semi-final.
Xiddiga reer Belgium waxa kale oo uu hoggaanka u hayaa laacibiinta ku tartamaysa abaal-marinta PFA ee xiddiga ugu wanaagsan Ingiriiska, waxaanu fursad weyn u haystaa inuu Ballon d’Or qaato haddii uu Sky Blues ka caawiyo inay hore ugu sii socoto tartanka Champions League oo ay wareeggiisa 16ka taagan yihiin, isla markaana lugtii hore 2-1 kaga adkaadeen Real Madrid.
Sadio Mane ayaa isaguna bandhig cajiib ah samaynayay xili ciyaareedkan, waxaanu dhaliyey 16 gool iyo toddoba gool oo uu caawiyey, waxaana kaliya naadigiisa kaga rikoodh wanaagsan Mohamed Salah oo 18 gool dhaliyey 9 kalena caawiyey.
Laakiin Mane ayaa xiddiga reer Masar kaga duwanaa bandhig ciyaareedka gudaha garoonka, waxaanu marar badan ka shaqeeyaa khadka dhexe illaa difaaca, isaga oo tiir-dhexaad u ahaa guulaha kooxdiisa ee xili ciyaareedkdna.
Si kastaba ha ahaatee, Van Persie waxa uu u sheegay Ronaldo iyo Messi in aanay sannadkan isku daalin hammiga Ballon d’Or oo ay gacanta u geli doono mid ka mid ah saddexdan ciyaartoy.